Uyikhetha njani ilaptop-Ezona ngcebiso zibalaseleyo kubuchwephesha | Amadoda aQinisekileyo
Uyikhetha njani ilaptop
UAlicia tomero | | yokuPhila, Te knoloji
Ikhompyuter ephathekayo xa ithelekiswa nedesktop Inika wena ukuzimela kokukwazi ukuzixhobisa ngayo apho ufuna khona. Ngenxa yenkqubela phambili entsha esinayo namhlanje, singanakho ukuba nelaptop ephuhlileyo, iphantse ibe neempawu ezifanayo nezekhompyuter yedesktop.
Ukuba ukhetho lokuba nesinye ezandleni zakho, kuya kufuneka uthathele ingqalelo Luhlobo luni lwemisebenzi oza kuyenza ngayo ukuthenga eyona ifanelekileyo. Ukwazi uxanduva kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwecompyuter yakho kufuneka wazi uhlobo lweempawu kunye nezibonelelo abanokukunika zona. Ukuba awuyazi ukuba ilaptop oyifunayo kufuneka ibe njani, kwicandelo lethu sikukhokela ngendlela yokwenza olona khetho lulungileyo.
1 Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa ukhetha ilaptop?
1.1 Ubunzima kunye nobukhulu bayo
1.2 Ibhetri yakho
1.3 Uhlobo lwesikrini kunye nobukhulu
1.4 Imemori ye-RAM
1.6 Ikhadi leMizobo
1.8 Unxibelelwano kunye nezongezo
1.9 Ngawaphi amaxabiso osinika wona kwimarike?
Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa ukhetha ilaptop?
Ikhompyuter inokuba luncedo kwimisebenzi eyahlukeneyo: ukusetyenziswa kwekhaya, ukudlala imidlalo, izifundo, ukuhlelwa kweefoto kunye nevidiyo, ubunjineli bekhompyuter, uyilo lwegraphic okanye iinkqubo ezinxulumene nokwakha ... Ngayo nayiphi na le misebenzi ihlala ikhompyuter iqondakala ngokwaneleyo kulo msebenzi, okanye ezibandakanya zonke.
Ubungakanani besikrini, ubunzima bayo, iprosesa yayo, i-RAM, ikhadi lemizobo, i-hard drive, unxibelelwano lwayo ... zezinye zeempawu ekufuneka zithathelwe ingqalelo, masizibone zonke ngokweenkcukacha:
Ubunzima kunye nobukhulu bayo
Ngohlobo losetyenziso oluza kunika ikhompyuter yakho ungahoya ubungakanani bayo kunye nobunzima bayo. Ziyancipha ngokuKhanya, kodwa kukho ezinye ezinokuthengiswa ukuya kuthi ga kwi-2 kilos ngokobunzima. Kuxhomekeka ekubeni uza kuhamba kakhulu nayo okanye hayi, sicebisa ukuba enye ilula kwaye ayinabukhulu bukhulu.
Elinye lamacandelo abalulekileyo ukuba into esiyifunayo kukuba nokuzimela ngokupheleleyo. Kukho iilaptops ezithi ikunikeze ubomi bebhetri yeeyure ezili-12 ukuya kwezi-15, nangona oko kuya kuxhomekeka ekusebenzeni kwakho oyinikayo. Ukuba into yakho kukuba nokuzimela okuninzi, uyazi ukuba kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto iphambili.
Uhlobo lwesikrini kunye nobukhulu
Izikrini eziqaqambileyo zibonelela ngesiqinisekiso esingcono kuba banokungafani ngakumbi kunye nokukhanya kwemibala yabo kunye nenkcazo enkulu. Le ndlela ilungele iikhompyuter eziza kusetyenziswa ngaphakathi, kodwa ukuba ukusetyenziswa kwayo kuya kuba ngokubanzi kwaye ukuba isetyenziswe ngaphandle, izikrini zematte zilungile.
Ubungakanani besikrini bukwabalulekile kuhlobo losetyenziso oluza kwenziwa. Ezi zili-12 ”zilungele ukuhamba nekhompyutha naphi na kwaye abo banobungakanani phakathi kwe-14 "kunye ne-16" bayimfuneko kwimisebenzi yemihla ngemihla. Izikrini esele zidlule kwi-16 ”zihlala zisetyenziselwa iikhompyuter eziphezulu kunye nezo zikhethekileyo kwimidlalo.
I-RAM yile nxalenye apho Zonke iinkqubo ezisebenzayo zigcinwa okwethutyana, imemori engaphezulu ye-RAM, kokukhona unokukwazi ukuzilawula ngaxeshanye kwaye ngaphandle kokuba ikhompyuter icothiswe okanye ixhonywe.
Iilaptops Nikeza iinkumbulo ukusuka kwi-4GB ye-RAM ukuya kwi-16GB ye-RAM. Ezi ze-4GB zenzelwe iikhompyuter zasekhaya. Ukuba uza kusebenzisa iithebhu ezininzi kunye neenkqubo ezivulekileyo ezinobunzima obuninzi kunye nomthwalo, iikhompyuter ze 8GB ukuya kwi-12GB.
Iprosesa ngamandla ekhompyuter yethu. Ezisisiseko ziza zixhotyiswe nge-i-3 okanye i-5 uluhlu oluya kwanela ukusetyenziswa kwesiqhelo. Ukuba uza kusebenzisa into efana nevidiyo okanye ukuhlelwa kweefoto, imidlalo okanye iinkqubo ezinxulumene noyilo okanye uyilo, olwakho uluhlu lwe-Intel i-7.
Eli candelo lekhompyuter Kubalulekile ukuba uyikhethe kakuhle ukuba uza kuyisebenzisa inkqubo yevidiyo kunye nomfanekiso, kwaye ukuze usebenze ngcono, uya kuyidinga enamandla amakhulu. Sinazo kubavelisi i-NVIDIA kunye ne-AMD. Amakhadi e-NVIDIA ngawona anikezela ngomgangatho ophezulu kunye namandla, sinayo ukusuka kwi-GTX 1060-70-80 ukuya kwi-GTX 2060-70-80.
Le yinxalenye eya kugcina lonke ulwazi kwikhompyuter yakho, ukuphakama komthamo, liphezulu ixabiso lekhompyuter yakho. Zimbini iintlobo zememori: Ukuqhuba kwe-SSD kuncinci kwaye kuhambelana, yomelele ngakumbi kwaye ngokukhawuleza okukhulu emsebenzini wabo. Icala elisezantsi kuphela kukuba ziyahanjiswa zinomthamo omncinci kakhulu kunokuba Ukuqhuba kanzima kweHDD kuhamba kancinci kwaye kungabizi kakhulu.
Unxibelelwano kunye nezongezo
Uninzi lweelaptops kwimarike sele zinonxibelelwano I-HDMI, i-USB 2.0 okanye i-3.0, kunye nomfundi wekhadi le-SD kunye negalelo le-VGA. Ezinye izinto ezongezelelekileyo kukuba inokuba ne-CD kunye ne-DVD yokufunda, enerekhoda eyakhelweyo, nangona uninzi lweekhompyuter zingenayo.
Ngawaphi amaxabiso osinika wona kwimarike?
Sinabo abo azidluli kwi-euro ezingama-300 kwaye zisinika yonke imisebenzi esisiseko, ukusuka kwinkululeko yayo ukuya kwiprosesa yayo. Ukusuka kwi- € 300 ukuya kwi- € 500 Sele sifumana iikhompyuter ngesisombululo esingcono sescreen kunye nemisebenzi esisiseko, kodwa kusenziwa okungaphaya.
Abo bagqitha kwi- € 750 Zizo ezibonelela ngeediski ze-SSD kunye nezixhobo ezintsonkothileyo, ezineempawu ezininzi eziphuculweyo zomgangatho ophezulu kunye nokusonjululwa kwescreen sakho kunye nokulungiswa kwememori yakho ye-RAM.
Idlula kwi- € 1000 Sele sinazo iikhompyuter ezinemizobo ephucukileyo kwaye sisenokuthetha nangabo bachukumisayo I-1500 € ezo zikuluhlu oluphezulu, Ilungele abo bafuna umgangatho ophezulu wokudlala.
Ukuba eyakho kukubona ngakumbi malunga neekhompyuter, sicebisa ukuba ufunde ukuba ungakhetha njani ikhompyutha yedesktop. Ukwenza oku, cofa apha esi sixhobo Kwaye siya kukubonelela ngeyona nto ifanelekileyo ukwazi ukuba ungayikhetha njani eyona ilungele iimfuno zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Uyikhetha njani ilaptop
Kwenziwe ntoni ngempelaveki